Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Inona no dikan'ny isa azo avy amin'ny trosa?
Aogositra 27, 2021
Ny olom-pirenena amerikana rehetra izay nampiasa fampindramam-bola dia omen'ny Fair Isaac Corporation, na FICO isa. Ny iray amin'ireo sokajy amin'ny ambaratonga misy azy dia fantatra amin'ny hoe "crédit fair". Izy io dia mandrakotra ny laharana 580-669. Raha mijery ny fahasimbana ianao, dia ho hitanao fa ambany kokoa noho ny "crédit tsara" ity ambaratonga ity. Eny, ny totalin'ny rariny dia tsy ny vokatra tsara indrindra. Fa maninona no azon'ny mpanjifa izany, ary ahoana no ahafahanao manatsara ny haavony?
Ny naotinao dia famantarana lehibe. Izy io dia ampiasain'ny karazana andrim-panjakana samihafa hampitahana ireo mpangataka miorina amin'ny fahamendrehana amin'ny trosa.
Azonao atao ny mahazo antoka fa ny totalinao dia raisin'ireo mpampindram-bola, orinasam-piantohana, tompon-trano ary mpikarama.
Misy fiantraikany amin'ny tontolon'ny fiainana izany, koa ny toerana ambony kokoa amin'ny ambaratonga FICO dia manokatra varavarana maro.
Ahoana no fiasan'ny isa
Tahaka ny VantageScore, ny metodolojika dia mifototra amin'ny ambaratonga 300 ka hatramin'ny 850. Ity dia mizara ho fizarana maro, miaraka amin'ny "tena mahantra" sy "marina" mialoha "tsara", "tena tsara" ary "miavaka". Valo amby valopolo dia ampy hahazoana ireo fepetra sy serivisy tsara indrindra. Ny fanombanana dia mifototra amin'ny tatitra natolotry ny biraon'ny firenena.
Raha ny filazan'ny birao Experian dia manodidina ny 17% ny olom-pirenena amerikana tafiditra ao anatin'io sokajy io. Ireo mpanjifa ireo dia tokony hanatsara ny toerana misy azy ireo hitehirizana vola ary hatokisana kokoa eo imason'ireo andrim-panjakana. Mety ho tratra izany amin'ny fanamboarana na fanarenana ny isa, miankina amin'ny fahamarinan'ny tatitra.
Ny fanamboarana dia mifototra amin'ny fifanolanana ara-dalàna hialana amin'ny vaovao manimba tsy marina. Zahao ny farany famerenam-bola.com famerenana amin'ny Credit Fixed hahitana ny fomba fiasan'izany. Ny fanarenana dia midika hoe miasa miaraka amin'ireo singa samihafa amin'ny fanombanana ny FICO, toy ny haben'ny trosa rehetra. Miankina amin'ny tanjona ny paikady - ohatra, mety mila avo kokoa ianao isa bola hividianana fiara.
Ireo mpangataka avy amin'ny sokajy "foara" dia jerena amin'ny fisalasalana. Misy fiantraikany amin'ny fepetra sy ny fahazoana miditra amin'ny serivisy fampindram-bola io haavon'ny io, na findramam-bola, trosa na carte de crédit izany. Arakaraka ny hampidinana ny haavon'ny ambaratongam-pahefana ao aminao no hampitomboana ny zanabola. Raha mahazo fankatoavana ianao, dia lafo ny mindrana noho ny an'ny olona ambony.
Tombony azo amin'ny isa tsara kokoa
Ny fiakaran'ny rafitra dia zava-dehibe amin'ny hoavinao ara-bola. Manintona olona marobe an-tapitrisany ny fanatsarana. Ireto ny sasany amin'ireo tombony.
Ny tahan'ny zanabola amin'ny karazana serivisy isan-karazany dia hihena, izay midika fa ho mora ny mindrana.
Miaraka amin'ny taha ambany dia ambany ny fandoavambola. Ho mora kokoa ny manefa ny adidy isam-bolana.
Hamoaka fepetra tsara kokoa amin'ny karatra ianao, ao anatin'izany ny zanabola, ny fifanarahana ary ny valisoa.
Ny fanofana trano na trano dia ho mora kokoa, satria ho hitan'ny tompon-trano fa tompon'andraikitra bebe kokoa ianao.
Maninona no mianjera ny isa?
Satria ny totalina dia miorina amin'ny tatitra, inona marina no misy fiantraikany amin'izany? Ny fomba FICO dia mandinika lafin-javatra dimy amin'ny fitondranao mindrana. Ny tsirairay amin'izy ireo dia misy fiantraikany manokana amin'ny satanao. Ity ny fiatoana:
fandoavana mialoha (35%);
ny vola ankapobeny (30%);
taonan'ny firaketana (15%);
kaonty vaovao (10%);
Mariho fa ny fomba fanombanana isan-karazany dia miankina amin'ny singa samihafa, na dia mitovy aza ny FICO sy ny VantageScore. Matetika, ny totaliny tsy manara-penitra dia voamarina vokatry ny tsy fahampian'ny teti-bola. Ohatra:
Mety tsy nandoa vola ianao taloha. Ity no fampahalalam-baovao manimba indrindra, satria mamaritra ny ampahany betsaka indrindra amin'ny isa io. Toy ny fitsipika, ny mpampindrana dia mitatitra tara tara 30 andro aorian'ny daty voatondro.
Farany, ny tsy fandoavana vola dia miteraka fanangonana, tsy fahombiazana, fatiantoka ary fanamelohana sivily, izay manaratsy ny fitambarany mandritra ny 7 taona (maharitra 7 taona ny fatiantoka banky).
Mety ho be loatra ny fetra azonao nampiasaina. Ny fampitomboana ny carte de crédit dia hevitra mahatsiravina, satria mitondra ny tahan'ny fampiasana hatramin'ny 100%. Mandritra izany fotoana izany, ny manam-pahaizana dia manoro hevitra ny tsy hihoatra ny 10% amin'ny fetra farany vitanao.
Raha tsy manana traikefa kely amin'ny trosa ianao dia fohy dia fohy ny tantaranao.
Ireo mpampindrana izay tsy mampiasa afa-tsy karazana serivisy iray na roa dia tsy mahay mifangaro. Io antony io, izay tompon'andraikitra amin'ny 10% amin'ny valiny, dia maneho ny fahaizanao mitantana karazana adidy isan-karazany.
Mety nahazo trosa be loatra ianao.
Mety efa nandefa fampiharana be loatra ianao tao anatin'ny fotoana fohy. Avela hividy ny tahan'ny fihenam-bidy, saingy misy fiatraikany ratsy amin'ny fangatahana karazan-trosa samihafa, satria toa olona mitady vola be ianao.
Ahoana no hanatsarako ny isa amin'ny trosako?
Raha latsaka tsy ara-drariny ny naotinao dia amboary ny lesoka momba ny fanaovana tatitra na manakarama manam-pahaizana manokana. Ny fanamboarana dia mifototra amin'ny fepetra voalazan'ny The Fair Credit Reporting Act, izay manery ny biraon'ny birao hanala izay fampahalalana tsy azon'izy ireo hamarinina. Mba hanokafana ny fifanolanana dia mila mitady porofo ianao ary manaova kopian'ny antontan-taratasy hamerenana ny fitakianao. ny môdely dia hita ao amin'ny tranonkalan'ny The Consumer Financial Protection Bureau.
Raha tsy izany, mitadiava orinasa mpanamboatra any amin'ny fanjakanao. Ireo matihanina dia hahita tsy fitoviana ao anaty rakitsoratrao, hanomana porofo ary hiady hevitra azy ireo amin'ny fomba ara-dalàna amin'ny anaranao. Mamonjy fotoana izany, satria tsy mila mivezivezy amin'ny lalàna ianao na mifampiraharaha amin'ny fifanoratana ara-dalàna. Ny taratasy fifanolanana rehetra dia mandefa fanadihadiana anatiny izay maharitra 30 andro. Raha manaiky ny fanovana ny birao dia hahazo maimaim-poana ny kopian'ny tatitra novaina ianao.
Rehefa marina ny isa marim-pototra dia tsy misy tokony hamboarina. Raha tokony ho izany dia jereo ireo lamina findramam-bola indramina mba hahitana hoe iza amin'ireo singa FICO no misintona ny fitoterana. Ohatra, mety mila mampihena ny fampiasana ianao amin'ny alàlan'ny fandoavana ny mizana sasany, ny fanitarana ny fetra, ny fahazoana karatra vaovao, na ny ho lasa mpampiasa nahazo alàlana. Hihatsara tsikelikely ny satananao, hamaha fepetra tsara kokoa ho an'ny karazana serivisy samihafa.